सुविधाभन्दा सेवा ठूलो - Pradesh Today सुविधाभन्दा सेवा ठूलो - Pradesh Today
सुविधाभन्दा सेवा ठूलो
कार्तिक ०५, २०७६ जीतसागर जि.एम.
कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी जनप्रतिनिधिको तलब रोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला राम्रो हो, तर यो पनि छ कि हामीहरू हिजोका दिनमा पनि तलब पाउनुपर्छ भनेर आएका थिएनौँ, आज पनि त्यो पक्षमा छैनौँ ।
जनताको सेवा गर्न हामीहरू निर्वाचित भएका हौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीहरूमा धेरै अधिकार आएपनि तलब खानुपर्छ भनेर हामीहरू कहिल्यै लागेनौं ।
हामीले प्रदेशको ऐन अनुसार मासिक परिश्रमिक लिँदै आएका थियौँ । अहिले पछिल्लो समय रिट परेपछि सर्वोच्चले त्यो रिटमा बहस गर्दै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले पाउँदै आएको परिश्रमिक रोक्का भएको छ । संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुमति प्रदान गरेको छ ।
तर धार २२८ मा मासिक पारिश्रमिक भन्ने शब्द नभएका कारणले सर्वोच्च अदालतले बदर ग¥यो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउनुपर्छ या पर्दैन ? भन्ने प्रदेश सरकारको जिम्मामा छ र प्रदेश सरकारले भोलिका दिनमा एउटाखाले निर्णय गर्ला । प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन कानुनहरू सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
प्रदेश सरकारमा पनि कानुन मन्त्रालय र कानुनविद्हरू छन् । उहाँहरूले बनाएको कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर ग¥यो । अब स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब पाउनु ठिक कि बेठिक हामीले बहस गर्नुभन्दा पनि प्रदेश सरकारले गर्ने कुरा हो ।
कर्मचारी कि राजनीतिकर्मी हामी ?
१५ नम्बर वडा अध्यक्ष
हामीहरू पैसा कमाउनका लागि राजनीतिमा आएका हैनौँ । पैसा कमाउनका लागि अन्य थुपै्र विकल्पहरू छन् । व्यापार, व्यवसायबाट पैसा कमाउने हो राजनीति गरेर पैसा कमाउन भन्ने होइन् । राजनीति विशुद्ध सेवामूलक पेशा हो । म पनि राजनीतिमा सेवा गर्न भनेर लागेको हो ।
आज नागरिकले मलाई जुन मत दिएर निर्वाचित गराउनुभयो, उहाँहरूको अमूल्य मतको सही सदुपयोग हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउने जुन निर्णय गरेको थियो ।
संविधानको मर्मअनुरूपमा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको भन्दै ठहर गरेकोमा मैले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दछु । हो केही जनप्रतिनिधिहरू आर्थिक लाभ लिनुपर्छ भन्नेमा पनि हुनुहुन्छ ।
उहाँहरूको लागि अहिले सर्वोच्चले गरेको फैसला ठिक छैन होला तर मेरा लागि भने सतप्रतिशत नै ठिक छ । अहिले म लगायत मेरो वडामा मासिक पारिश्रमिक नपाएपछि काम गर्दैनौँ भन्ने अवस्था छैन् र हुने पनि छैन् ।
समाज सेवाका लागि राजनीतिमा होमिएको मान्छेले आर्थिक लाभ लिनुपर्छ भन्ने गलत हो भन्ने लाग्छ । तर पनि प्रदेश सरकारले नीतिमा पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था ल्याएपछि हामीलाई काम गर्न पनि असजिलो पनि थियो ।
मासिक परिश्रमिक पाउन शुरू गरेपछि काम गर्न किन असहज थियो भने अधिकांशले तलब लिने पनि जनप्रतिनिधि कसरी हुन सक्छन् भन्ने गुनासो गर्ने गरेका थिए । मासिक तलब लिने कर्मचारी की जनप्रतिनिधि ?
अधिकांशले यस्तै प्रश्न गर्ने गरेका थिए । तर म एक्लैले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई नमान्ने भन्ने अवस्था पनि त थिएन् । अनि अर्को कुरा तलब लिइसकेपछि कार्यालयमै बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका कारण पनि गनासाहरू थुप्रै आएका थिए ।
हामीले जनताका काम गर्न कार्यालयमै बस्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन् । अहिले सर्वोच्चले गरेको फैसला फर्किन्छ भन्ने लाग्दैन् । फैसला कार्यान्वयनमा बरू बढी जोड दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि नितान्त सेवामूलक भावले काम गर्नुपर्छ र मात्रै विकासका गति अघि बढ्न सक्छन् ।
आर्थिक लाभ लिने हो म जो कोहिलाई पनि भन्छु आर्थिक लाभ लिनका लागि अन्य विभिन्न पेशा, व्यवसाय छन् राजनीति नगर्नुस् । म त जनताका समस्यालाई ध्यान दिँदै सेवामूलक काम गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ ।
वास्तवमा सरकारले नै यस्तो निर्णय गर्न हुने थिएन् । राज्यमा जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग हुुनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा जनताको करको दुरूपयोग हुनुहुँदैन् ।
५ नम्बर वडा सदस्य
स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा पारिश्रमिक पाउने गरी प्रदेश सभाले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकोमा म ज्यादै खुसी छु । सेवाका भावले राजनीतिमा होमिएका हामीहरूले तलबी जनप्रतिनिधि भनेर धेरैले आलोचना गर्ने गरेका थिए । अदालतले नागरिकको पक्षमा फैसला गरेको छ, यहाँ कसैले चित्त दुखाउनुपर्ने, कोही खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन् ।
विकास निर्माणमा कामले बजेट नपाइरहेको अवस्थामा हामी सेवाका हिसावले आएका जनप्रतिनिधिले मासिक सेवा सुविधा लिन थालेपछि राज्यको अरबौँ ढुकुटी महिना दिनमै सकिने गरेको थियो ।
नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी राज्यले आफ्नो ढुकुटी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको बारेमा प्रदेश सरकारले गर्ने भएपनि यो मासिक पारिश्रमिक पाउने कुरा देश र जनताका लागि आर्थिक भार बढाउने कुरा छ ।
स्थानीयस्तरका मात्र होइन सबै तहका प्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिनु हुँदैन् भन्ने हो तर संविधानतः प्राप्त गरेका अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित गर्न भने पक्कै मिल्दैन् । विगतका वर्षहरूमा राजनीतिज्ञले मासिक पारिश्रमिक लिएको कुनै तथ्यहरू छैनन् ।
सेवामुखी भावले मात्रै राजनीति सफल हुन्छ । अहिले अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्दै हामीकहाँ कुनै पनि जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट हुनुभएको छैन्, बरू स्वागत गरेका छौँ हामीहरू ।
हुनसक्छ प्रदेश सरकारले कामका हिसाबले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब उपलब्ध गराउने नीति लिएको होला, तर अदालतले भनिसकेपछि हामीहरूले फैसलालाई पूर्ण सम्मान गछौँ ।
आर्थिक लाभभन्दा सेवा ठूलो
११ नम्बर वडा सदस्य
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला जनताको पक्षमा छ । जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउने भन्ने संविधानको कुनै पनि धारामा छैन् । जनताको सेवाका लागि मत जितेर आएका हामीले सेवालाई आर्थिकसँग जोडेर हेर्नुहुँदैन् । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउन थालेपछि थुप्रै गुनासाहरू आउने गरेका थिए ।
राजनीति सेवा कि व्यापार ? भन्ने आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् । नागरिकले प्रश्न गर्नुपनि स्वभाविक पनि हो । हामीलाई जनताले पैसा कमाउनभन्दा सेवा गर्न पठाउनुभएको हो ।
जनताले हामीप्रति गरिने विश्वास गुम्न थालिसकेका अवस्थामा अब अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले फेरी हामी जनप्रतिनिधिको साँख जोगिन्छ कि भन्ने आशा छ । सरकारले जनप्रतिनिधिलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने किसिमले गरेको नीति सर्वोच्च अदालतले ढिलै भएपनि राष्ट्रहितको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई तलब भन्ने शीर्षक नै शुरूमा गलत थियो । यसले जनतामा राम्रो सन्देश दिएको थिएन् । ढिलै भएपनि न्यायीक निकायले जनताको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
अदालतको जनप्रतिनिधिले तलब नपाउने जुन व्यवस्था खारेज गर्न भन्यो यसले नै जनप्रतिनिधिको उचाई बढेको छ । अब अहिले मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँको असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु स्वभाविक भएपनि यसले कुनै अर्थ बोक्दैन् ।
न्यायीक निकायले फैसला गरिसकेपछि अब यसको सही कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । कतिपय जनप्रतिनिधिलाई समस्या हुनसक्छ तर हामीले हेर्ने भनेको आमनागरिकको भावनालाई हेर्ने हो ।
जनताको भावनालाई कदर गर्न सकियो भने पो जनप्रतिनिधिको अर्थ रहन्छ । तलबैभन्दा पनि काम र दौडधुपको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर व्यवस्था गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ होला ।
बबईका ग्रामीण सडक मर्मत
खेलकुदको ४५ विगाह जग्गा कब्जामा